“Man United waxay u baahan tahay inay u soo baxday Champions League xilli ciyaareedka soo socda” – Solskjær – Gool FM
(Manchester) 27 Feb 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa xaqiijiyay muhiimada ay Red Devils u leedahay tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Dhinaca kale tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in Manchester United ay wajihi doonto dhibaato dhaqaale haddii ay ku guuldareysato inay u soo baxdo tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Wargeyska “Guardian” ee dalka England ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay macalin Ole Gunnar Solskjær, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan nahay koox weyn, waxaanan leenahay dhinacyo dhaqaale oo wanaagsan, laakiin inta aad ka maqan tahay, waad dhibtoon doontaa, sidaas darteed waxaan rajeyneynaa inaan ku soo laabano tartanka Champions League”.
“Sababa la xiriira kubadda cagta, iyo sababo dhaqaale awgood, waa inaan diirada saarno tartanka UEFA Champions League iyo FA Cup”.
“Waa inaan la tacaalnaa kulan walba waqtigiisa, labadda dhinacba haddii ay ahaan laheyd tartanka UEFA Europa League ama horyaalka Premier League, si aan ugu soo baxno Champions League”.
Waxaa xusid mudan in Manchester United ay ugu soo bixi karto tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda, haddii ay ku guuleystaan xilli ciyaareedkan tartanka UEFA Europa League ama ay kaga dhameysato horyaalka Premier League mid ka mid ah afarta boos ee ugu sarreysa, waxayna haatan Red Devils ku jirtaa booska shanaad ee dhanka miiska kala sareynta iyagoo leh 41 dhibcood, waxayna saddex dhibcood u jiraan booska kaalinta afaraad oo ay fadhiso kooxda Chelsea.